Uhambo lwezincwadi oludabula iYurophu | Izindaba Zokuhamba
UCarmen Guillen | | Cultura, Ukuphunyuka eYurophu, Ukuzilibazisa
Namuhla, ukuhlonipha usuku olusondele, i Usuku lwencwadi, futhi ngaphandle kokungayinaki into yethu yokuhamba, siphakamisa ukuthi a uhambo lwezincwadi oludabula iYurophu esandleni sezincwadi eziphefumulelwe noma isakhiwo sazo esenzeka ekhoneni elithile laseYurophu.
Uma uthanda ukuhamba njengokufunda, uphambi kwesinye sezindatshana ezikhuthazayo ongazithola namuhla. Ngabe uzosixhawula kulolu hambo lwemibhalo?
1 Izindawo zokudlela ezinhle zemibhalo yaseMadrid
2 IDublin nemiklomelo yayo emi-4 yeNobel
3 ISt. Petersburg evela encwadini ethi «Ubugebengu nokujeziswa»
4 Istanbul ngesandla sika-Orhan Pamuk
Izindawo zokudlela ezinhle zemibhalo yaseMadrid
Edolobheni laseMadrid nasemakhoneni alo, imisebenzi yezimpawu efana noCaptain Alatriste ka-Arturo Pérez Reverte iye yakhuthazwa, edlula ezindaweni ezaziwa kakhulu njenge I-Plaza de la Villa noma i IVilla Inn, ngidlula I-Plaza Mayor, lo Isonto laseSan Ginés, la ILope de Vega House Museum, the Imyuziyamu yasePrado, the Isigodlo Sokuzalwa Komuntu futhi i UCaptain Alatriste's Tavern.
Kodwa-ke, okunye okunye ngaphandle kwezincwadi futhi okuseduze nababhali, sisengakuthola Izindawo zokudlela ezintathu zemibhalo lapho kwahlangana khona ukhilimu wababhali bethu bakudala abahle kakhulu. Lezi izi: el Ikhofi Lokuhweba, el ICafé del Círculo de Bellas Artes futhi i Ikhofi leGijon. Abanye babahambeli abavelele abashiyele uphawu lwabo lwemibhalo yibo: U-Antonio Buero Vallejo, uCamilo José Cela, u-Antonio Gala, uGloria Fuertes, uBenito Pérez Galdós o IValle-Inclán, phakathi kokunye okuningi.
Kwesinye sazo, ikakhulukazi eCafé Gijón, unyaka ngamunye kugujwa uMklomelo wezincwadi othola igama lawo. Umklomelo onikezwe inoveli ehamba phambili eqhamuka kumlingisi nomlobi uFernando Fernán Gómez, uCamilo José Cela noma u-Enrique Jardiel Poncela, phakathi kwabanye.
IDublin nemiklomelo yayo emi-4 yeNobel
Iqiniso lokuthi idolobha laseDublin lizalele imiklomelo emi-4 yeNobel likwenza kube yinto okumele uyibone. Uma ungayazi imininingwane, le miklomelo emi-4 iye kubabhali I-WB Yeats, uSamuel Beckett, uSeamous Heaney noBernard Shaw.
Uma ngaphezu kwalokhu ungeza amanye ama-greats amabili afana noJames Joyce no Oscar Wildeowokuqala ukuba "imbangela" eyinhloko ye- Umcimbi weBloomsday eDublinAkunakuphikwa ukuthi iDublin ifanelwe ukubonwa ngalolo suku lomgubho oshiwoyo.
El Bloomsday Kungumcimbi waminyaka yonke obusenziwa minyaka yonke ngoJuni 16 kusukela ngo-1954. Ngani? Yenziwe ngokuhlonipha uLeopold Bloom, umlingiswa ophambili wale noveli "Ulises" de UJames Joyce. Labo ababamba iqhaza emcimbini onjalo, ngalolo suku, badla futhi badle ngokufana nabalingisi abaphambili bomdlalo futhi benze nezenzo ezahlukahlukene ezinokufana okuthile nenoveli.
Uma uhambela eDublin, akufanele uphuthelwe:
Umthambo omkhulu waseDublin: U-O'Connell Street.
Umgwaqo wabahamba ngezinyawo eGrafton Street.
Indawo yasethempelini Bar, engenye yezindala futhi enomoya omuhle kakhulu.
Indawo endala yokuphekela utshwala yaseGuinness.
IDublin Castle, eyakhiwe kabusha ngenxa yomlilo ngo-1684.
Isakhiwo esikhanyayo seCustom House, esakhiwe ngekhulu le-XNUMX.
Ikhasino yakho yasolwandle.
Futhi iTrinity College University, engenye yodumo kakhulu eYurophu futhi endala kunazo zonke e-Ireland.
I-St. Petersburg evela kwinoveli "Ubugebengu nokujeziswa"
Kwinoveli "Ubugebengu nokujeziswa" kusuka kumbhali UFyodor Dostoevsky, singabona amazwibela nezindlela zokugqoka ezigqoke i- Idolobha laseRussia iSaint Petersburg.
Umbhali wale noveli ubeka uRaskolnikov, umlingiswa oyinhloko, ku- Amakhona aseStoliarni naseGrazhdánskaya, okwathiwa ngekhulu le-1999 iSrédnaya Meschánskaya. Ngo-19, usizo olukhulu lwavela ku-XNUMX Grazhdánskaya Street Indlu kaRaskolnikov, ngesithombe esibaziwe sombhali nangezinyathelo ezithile ezisikhumbuza ukuthi igumbi likaRodión Románovich laliseduze nophahla nje nokuthi lalitholakala ngokukhuphuka izinyathelo eziyishumi nantathu.
Singathola futhi i- Kokushkin ibhuloho, eduze nezinye izindawo ezisemqoka kule noveli njengendlu yombolekisi wemali wakudala uRaskolnikov abulala, ukwakhiwa kwehhovisi lamaphoyisa, ibhuloho laseVoznesensky, lapho isikhulu esisemthethweni uMarmeladov sifa ngaphansi kwamasondo enqola, owayedakiwe, kanye indlu yendodakazi yakhe uSónechka, intombazane empofu ephoqeleka ukwenza imali ngokwenza umgwaqo.
Kunoma ikuphi, njengoba sithola ezinye zalezi zindawo, sizokwazi ukubona izichasiselo nezingcaphuno ezindaweni ezithile ezizohamba nathi endleleni «yobugebengu nokujeziswa».
Istanbul ngesandla sika-Orhan Pamuk
Incwadi "Istanbul" isibonisa ngendlela ebabazekayo futhi esondelene nelinye lamadolobha athakazelisa kakhulu eYurophu abheka e-Asia. Kepha ukwenza ngendlela yomlando ngokuphelele, eyombhali uqobo Orhan Pamuk.
UPamuk uveza u-Istanbul emlandweni wakhe wokuphila ngokuncanyana, ngokuthi kwakuyini izwe elikhazimulayo esikhathini esedlule kepha esimi ndawonye nanamuhla usazama ukuthola indawo yayo phakathi kwamanye amadolobha amakhulu ase-Europe. Izakhiwo ezindala nezinhle ezingamanxiwa, izithombe ezibalulekile neziguquliwe, izindlu zezipoki nezindawo eziyimfihlo lapho, ngaphezu kwakho konke, iBosphorus yezokwelapha ivelele, ekukhunjweni kombalisi impilo, impilo nenjabulo.
Le elegy isebenza ngombhali ukwethula abadwebi, ababhali kanye nababulali abadumile, ngamehlo umbalisi achaza idolobha. Isithombe esihle sedolobha nempilo, zombili zithakazelisa ngokulinganayo.
De kumele uvakashele e-Istanbul, yizindawo ezilandelayo:
ISonto LaseSanta Sofía, laguqulwa laba ithempeli, kwathi kamuva laba umnyuziyamu.
IMosque eluhlaza okwesibhakabhaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Uhambo lwezincwadi oludabula iYurophu